Khaatumo oo qorshaynaysa dilal shirqool ah oo ka dhan saxafiyiin (Xog hoose) – make music movie Edition: International | Video
Published On: 8 July 2012 5:33 pm Wararka | By Taleex Media Khaatumo oo qorshaynaysa dilal shirqool ah oo ka dhan saxafiyiin (Xog hoose)
Shir dhinaca taleefanka ah oo loo qabtay koox gaar ah oo isku dano ah ayaa waxa ay kaga arinsadeen dhaawac uu u gaystay hadalkii Axmed Karaash siidaayay 4tii July 2012 mar uu la hadlayay taageerayaasha mashruuca Khaatumo.
Shirkan oo uu soo abulay nin lagu magacaabo Cabdirashiid Macalin Faarax oo degan dalka Maraykanka ayaa waxaa aad loogu lafa guray habka uu hadalka Karaash warbaahinta ugu dusay.
Kooxda Xalay shirka taleefan isugu timid oo u badna dumar ku nool dalka Maraykanka isla markaana dhaqaalo ku taageera kooxaha argagaxisada Soomaaliya ayaa waxaa ay ku yabooheen lacag dhan 5,000 oo doolar oo lagu fuliyo dilal shirqool ah oo ka dhan ah saxafiyin ka soo jeeda Sool,Sanaag iyo Cayn.
Taleex Media ayaa 24 saac ee la soo dhaafay baaritaan ku waday magacyada iyo cinwaanada dadka lacagta ku yaboohay oo ku nool dalka Marayanka iyo dadka ay ku hagaajiyeen.
Sida ay Taleex Media u sheegeen xubno ka qayb galay shirkaasi waxaa shirka marti ku ahaa isla markaana aad u soo dhaweeyay go’aanka dilka ka dhanka saxafiyiinta xorta ah ee aan u adeegin mashruuca Khiyaanada ah raggan hoos ku xusun:-
Cali Khaliif Galaydh Bahararsame
Cabdikariin Xasan Jaamac Cali Geri
Cali Xaaji Cige Yaxye
Cabdirashiid Macalin Faarax. Hayaag
Nimanka oo dhamaantood hunguri ka hayo siyaasada Soomaaliya qaarkoodna horay ugu fashilmeen ayaa waxa ay qaadi doonaan masuuliyada wixii dhibaato ah ee soo gaadhay saxafiyiinta xorta ah.
Sida ay sheegeen dadkii ka qayb galay shirkaasi oo hab qarsoodi ah ku helay nambarada shirka waxaa la isla qaatay in lacag dhan 5,000 oo doolar deg deg loo diro si loogu maal geliyo shirqool ka dhan ah saxafiyiinta.
Nin magaciisa qariyay oo ku nool dalka Sweden ayaa sheegay in uu diyaar u yahay fulinta qorshahaasi ninkan oo taleefankiisa ay heshay Taleex Media ayaa sheegay in uu aadayo geeska Afrika si uu u abaabulo habkii loo dili lahaa saxafiyiin uu Galaydh u arko in ay caqabad ku yihiin mashruuciisa.
Ninkan oo xogtiisa loo gudbiyay laamaha amaanka gaar ahaan kuwa ka hortaga argagaxisada (Kontraterrorism) ee Sweden ayaan dhawaan idiin soo gudbin doonaa xogtiisa oo dhan.
Kooda Galaydh u shaqeysa ayaa aaminsan haddii la waxyeeleeyo hawlwadeenada warbaahinta xorta ah ee wax ka qora gobolada SSC in ay ku guulaysanayaan mashruucooda khiyaanada ah ee ay ku jaqayaan dhiiga shacabaka Dhulbahante.
Waxaa ay shabakadu soo bandhigaysaa magacayada, talefanada, cinwaanada iyo qabiilada ay ka soo jeedan dadka qarashka ku bixiyay maalgalinta shirqool ka dhan weriyaasha xorta ah.
Sidoo kale waxaan soo gudbin doonaa codkii laga duubay shirkaasi ka dib marka ay laamaha amaanka dalka Maraynka oo baaritaan gacanta ku haya ogolaadaan.